लामखुट्टे: तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा | नि: शुल्क हार्डवेयर
लामखुट्टे: तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा
इसहाक | 12/04/2022 09:00 | अद्यावधिक गरियो 25/02/2022 16:36 | सामान्य
पक्कै पनि थाहा छ लामखुट्टे के हो, र यसैले तपाई यस लेखमा आउनुभएको छ, किनकि तपाईलाई थप विवरणहरू जान्न आवश्यक छ वा तपाइँ यसलाई तपाइँको अपरेटिङ सिस्टममा कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईंलाई यो खुला स्रोत परियोजना के हो, यो केका लागि हो, यसले तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ भन्ने थाहा छैन भने तपाईंको IoT परियोजनाहरू, र के हो MQTT प्रोटोकल जसले यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ।
1 MQTT के हो?
2 लामखुट्टे के हो?
3 तपाइँको अपरेटिङ सिस्टम मा Mosquitto कसरी स्थापना गर्ने
MQTT के हो?
लामखुट्टे आधारित छ MQTT प्रोटोकल, जसको अर्थ Message Quueing Telemetry Transport हो। "हल्का" सन्देशको लागि नेटवर्क प्रोटोकल, अर्थात्, ब्यान्डविथको सन्दर्भमा विश्वसनीय वा सीमित स्रोतहरू नभएका नेटवर्कहरूका लागि। यो सामान्यतया मेसिन-टू-मेसिन (M2M) संचार, वा इन्टरनेट अफ थिंग्स (IoT) जडानहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
MQTT द्वारा सिर्जना गरिएको थियो डा एन्डी स्ट्यानफोर्ड-क्लार्क र अर्लेन निपर 1999 मा। यो प्रारम्भिक रूपमा तेल र ग्यास उद्योगमा डाटा निगरानीको लागि टेलिमेट्रीको लागि प्रयोग गरिएको थियो जुन रिमोट सर्भरहरूमा पठाइएको थियो। ती प्लेटफर्महरूमा, धेरै स्थिर जडान स्थापित गर्न वा निश्चित केबल राख्न सम्भव थिएन, त्यसैले यो प्रोटोकलले सीमितताहरू समाधान गर्न सक्छ।
पछि, MQTT मानकीकृत र खुला थियो, त्यसैले अब यो एक खुला स्रोत प्रोटोकल हो जुन द्वारा व्यवस्थित गरिएको छ। MQTT.org, र बनेको छ IoT को लागि मानक.
MQTT TCP/IP को माथि चलाउन र काम गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ, जस्तै टोपोलोजी संग PUSH/SUBSCRIBE गर्नुहोस्। यी प्रणालीहरूमा एकले फरक गर्न सक्छ:
ग्राहक: यी जडान भएका उपकरणहरू हुन् जसले एकअर्कासँग सीधै सञ्चार गर्दैनन्, बरु ब्रोकरसँग जडान हुन्छन्। नेटवर्कमा प्रत्येक ग्राहक एक प्रकाशक (डेटा पठाउने, सेन्सर जस्तै), एक ग्राहक (डेटा प्राप्त), वा दुवै हुन सक्छ।
दलाल: यो एक सर्भर हो जसको साथ क्लाइन्टहरू सञ्चार गर्छन्, संचार डाटा त्यहाँ आइपुग्छ र अन्य ग्राहकहरूलाई पठाइन्छ जससँग तपाईं सञ्चार गर्न चाहनुहुन्छ। दलालको उदाहरण Mosquitto हुनेछ।
साथै, प्रोटोकल घटना-संचालित छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै आवधिक वा निरन्तर डाटा प्रसारण छैन। ग्राहकले सूचना पठाउँदा मात्र नेटवर्क व्यस्त हुन्छ, र नयाँ डाटा आउँदा ब्रोकरले ग्राहकहरूलाई मात्र जानकारी पठाउँछ। यसरी राख्नुहुन्छ प्रयोग गरिएको ब्यान्डविथको न्यूनतम मात्रा.
लामखुट्टे के हो?
ग्रहण लामखुट्टे यो नि:शुल्क र खुला स्रोत सफ्टवेयर हो, EPL/EDL अन्तर्गत इजाजतपत्र प्राप्त, र MQTT प्रोटोकल मार्फत सन्देशहरूको दलाल वा मध्यस्थकर्ताको रूपमा कार्य गर्दछ। यो सफ्टवेयर धेरै हल्का वजनको छ, विभिन्न यन्त्रहरूको भीडको लागि उपयुक्त छ, PC देखि कम-शक्ति सम्मिलित प्लेटहरू।
Paho एक सम्बन्धित परियोजना हो जसले बहु-भाषा MQTT ग्राहक पुस्तकालयहरू लागू गर्दै, Mosquitto को पूरक बनाउन सक्छ। स्ट्रिमसिटहरू प्रक्रिया नियन्त्रण, ड्यासबोर्डहरू सिर्जना गर्ने, इत्यादिको लागि स्प्रेडसिट र वास्तविक-समय इन्टरफेसमा अर्को परियोजना हो।
थप रूपमा, Mosquitto ले पनि प्रदान गर्दछ सी पुस्तकालय MQTT ग्राहकहरू लागू गर्न, साथै लोकप्रिय mosquitto_pub र mosquitto_dub कमाण्ड लाइन ग्राहकहरू समावेश गर्न। अर्कोतर्फ, यो धेरै सरल छ, केही मिनेटमा तपाईले आफ्नै बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईसँग परीक्षण सर्भर पनि छ। test.mosquitto.org, ग्राहकहरूलाई विभिन्न तरिकामा परीक्षण गर्न (TLS, WebSockets, …)।
र यदि तपाइँसँग समस्या छ भने, Mosquitto छ शानदार समुदाय विकास र फोरम र अन्य ठाउँहरूमा तपाईंलाई मद्दत गर्न इच्छुक।
थप जानकारी - आधिकारिक वेब
तपाइँको अपरेटिङ सिस्टम मा Mosquitto कसरी स्थापना गर्ने
अन्तमा, तपाईंले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि व्याख्या गर्नुपर्छ Mosquitto डाउनलोड गर्नुहोस् र आफ्नो अपरेटिङ सिस्टममा स्थापना गर्नुहोस्, त्यसैले तपाइँ यसलाई तपाइँको IoT परियोजनाहरु संग परीक्षण सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईं यसलाई धेरै तरिकामा गर्न सक्नुहुन्छ:
प्रयोग गर्नुहोस् स्रोत कोड y यसलाई आफैं कम्पाइल गर्नुहोस्.
बाइनरीज: तिमी सक्छौ डाउनलोड क्षेत्रबाट डाउनलोड गर्नुहोस्.
Windows: मैले 64-बिट वा 32-बिट संस्करणमा .exe बाइनरी छोडेको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाइँसँग भएको प्रणालीमा निर्भर गर्दछ। एकपटक डाउनलोड भएपछि, तपाइँ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँसँग समस्या छ भने, तपाइँ README-windows.md फाइल पढ्न सक्नुहुन्छ।
MacOS: डाउनलोड लिङ्कबाट बाइनरी डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि Mosquitto स्थापना गर्न brew.sh स्क्रिप्ट प्रयोग गर्नुहोस्।
जीएनयू / लिनक्स: त्यहाँ स्थापना गर्न धेरै तरिकाहरू छन्, जस्तै:
Ubuntu र स्न्याप रन आदेश संग अन्य distros: स्न्याप स्थापना लामखुट्टे
Debian: sudo apt-add-repository ppa: mosquitto-dev/mosquitto-paa र sudo apt-get update & sudo apt-get install mosquitto
थप: अन्य डिस्ट्रोसका लागि र आधिकारिक भण्डारबाट रास्पबेरी पाईका लागि पनि उपलब्ध छ।
अरूलाई: मा थप जानकारी हेर्नुहोस् यो वेब Mosquitto binaries को।
यस पछि, तपाइँसँग पहिले नै तपाइँको अपरेटिङ सिस्टम मा Mosquitto स्थापित छ र यो तयार हुनेछ तपाईलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न वा व्यवस्थापन गर्न, जस्तै Celado संग.
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » सामान्य » लामखुट्टे: तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा
सीएनसी मेसिनहरू: संख्यात्मक नियन्त्रणको लागि गाइड